2019 #NABShow: အသံလွှင့်ပညာရေးအစည်းအရုံး: ပညာရေး & စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ #BEAvegas - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » အသားပေး » 2019 #NABShow: အသံလွှင့်ပညာရေးအစည်းအရုံး: ပညာရေး & စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ #BEAvegas
2019 #NABShow: အသံလွှင့်ပညာရေးအစည်းအရုံး: ပညာရေး & စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ #BEAvegas
အဆိုပါ ထုတ်လွှင့်ပညာရေးအစည်းအရုံး ပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသနစီမံကိန်းများအပေါ်အာရုံစိုက်ကြောင်းမီဒီယာအနုပညာတစ်ဦးပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုလေ့ကျင့်ရေးဓာတ်ခွဲခန်းများလက်ခံရရှိရန်ရောနှောပညာတတ်များနှင့်ကျောင်းသားများအတွက်တစ်ဦးမဖြစ်မနေ, ရွက်ပေါက်ကျောင်းသားများအားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကွံဉာဏျ (ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်) ဖြစ်ပါသည်ကြောင့်အနည်းဆုံး 6th မှဧပြီလ 9th ထံမှရာအရပ်ကိုကြာ Westgate Las Vegas မှ Resort ကို.
နှင့် တွဲဖက်. အလုပ်လုပ် #NABShow 2019, ဒီအာရုံအီလက်ထရောနစ်မီဒီယာပညာရှင်များနှင့်ပညာရေးအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်ရာအရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်အထူးဖြစ်ရပ်များတစ်တစ်တန်ဖြစ်ပြီး, အစည်းအဝေးများမီးမောင်းထိုးပြ။ က Nexus ဖြန်ဖြေ: .. ပညာရေး & စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ | အဆိုပါ BEA2019 ကွန်ဗင်းရှင်း Spotlight ကို€ ISA â€ "ဒီyearâ€™ s ကိုမီးမောင်းထိုး, ပညာရှင်များအသစ်သောမိတ်ဖက်တည်ဆောက်ကူညီခြင်းနှင့်လက်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးချဲ့ထွင်ဖို့အကယ်ဒမီနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတိုးမြှင့်သည့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုအလေ့အကျင့်သို့သီအိုရီအစာကျွေးခြင်းကနေရရှိခဲ့ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း, သိရှိနိုင်ဖို့ရည်ရွယ် သုတေသနကွာဟချက်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းမိတ်ဖက်နှင့်အတူမွေးသုတေသနပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်းများ။
BEA မနှစ်ကအလုပ်ရှာဖွေရေးမျှတသော / ဘွဲ့လွန်ကျောင်းဟန်ပြမိတ်ဆက်, 30 ကျောင်းများပါဝင်ခဲ့ရသော၌ဤဟန်ပြသည့်ဘွဲ့လွန်ကျောင်းဟန်ပြ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသ၌ရှိ၏။ ဒီနှစ်မှာတော့ BEA ကျယ်ပြန့်ပရိသတ်ကိုရောက်ရှိဖို့ကတိုးချဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ BEA2019 နောက်တဖန်, အင်္ဂါနေ့တွင်ဧပြီလ9အဆိုပါဘွဲ့လွန်ကျောင်းဟန်ပြအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဒီနှစ်ကနဲ့ပေါင်းစပ်နေပါသည် NAB ပြရန်€™ s ကိုအလုပ်ရှာဖွေရေးတရားမျှတသောa။ ဤသည်တနေ့တစ်ခုတည်းဖြစ်ရပ်ကျောင်းများ BEA2019 နှင့်တက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ပိုကြီးတဲ့ရေကူးကန်မှတဆင့်အလားအလာဘွဲ့ရကျောင်းသားများကိုပစ်မှတ်ထားဖို့ သာ. ကွီးမွတျအခွင့်အလမ်းကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ် NAB ပြရန်။ အတူ co-ထုတ်လုပ် လူငယ်ကဏ္ဍပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းအမျိုးသားအစည်းအရုံး (NABEF), ဖြစ်ရပ်ကိုလည်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြန်လည်စတင်, panel ကိုဆွေးနွေးချက်များ, တဦးတည်း-on-one အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပြ feature များနှင့်အသံလွှင့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းအမျိုးမျိုးသောအလုပ်အကိုင်များများအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုငှားရမ်းပါလိမ့်မယ်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းBEAâ€™ s ကိုစည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုပညာတတ်များနှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏အမြင်များကနေလယ်ပြင်၌နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်လာသင်ယူကြည့်ဖို့ 1,300 မီဒီယာဒြေအဖွဲ့ဝင်များကျော်ဆွဲဆောင်။ ကျနော်တို့ 400 ကျော်ကျောင်းသားများကိုနှစ်စဉ်တစ်ဦးတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီလာခံတက်ရောက်ရန်ပြီ NAB ပြရန် နှစ်စဉ်အလုပ်ရှာဖွေရေးတရားမျှတသောတက်ရောက်ရန်တဲ့တထောင်တက်ရောက်န်းကျင်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ BEA2019 များအတွက်စျေးနှုန်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ရေးကြည့်ရှုရန်ဒီနေရာကို go: www.beaweb.org/conv/about-beavegas/ အားလုံးနှုန်းထားများမတ်လ 6, 2019 အပေါ်ကုန်ဆုံးပြီးသောအစောပိုင်း-ငှက်စျေးနှုန်းဖြစ်ကြသည်။
အေျကာင္းအရာ #BEAvegas 2019:
အဆိုပါအသံလွှင့်ပညာရေးအသင်း (BEA) ထိုးထွင်းသိမြင်, ဆရာ, ဆရာမများ, ကျောင်းသားများနှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များများအတွက်မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးအတွက်ထူးချွန်ကားမောင်းပရီးမီးယားလိဂ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာသင်နှစ်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မီဒီယာဝိဇ္ဇာ၏ BEA ပွဲတော်မှနောက်ဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသနစီမံကိန်းများ, ဆော့ဖ်ဝဲလေ့ကျင့်ရေးဓာတ်ခွဲခန်းများလွတ်မြောက်နိုင်ရန်todayâ€™်ထိပ်တန်းကြေညာသူ, ကျောင်းသားများအဘို့အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကွံဉာဏျမှစပီကာ-အစွန်းဖြတ်တောက်ရန်, ဒီအီလက်ထရောနစ်မီဒီယာပညာရှင်များနှင့်ပညာရေး€áဆုံရှိရာတစ်နေရာတည်းဖြစ်ပါသည် တစ်ဦးတတ်နိုင်စျေးနှုန်းအတွက် "အားလုံး။
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား	2019-02-04
ယခင်: အဆိုပါ Switch Key ကိုစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဝါရင့်များ၏အပိုဆောင်းနှင့်အတူဂိမ်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်အားကစားခေါင်းဆောင်မှုတိုးချဲ့
နောက်တစ်ခု: IDC မှ: ရုပ်ရှင်ရုံအသံလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ထူးချွန်ကုန်ပစ္စည်းဆုချီးမြှင့်သည်ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီးလက်ငင်းဆွေးနွေးပွဲ Cleaner